Baalal digaag ah oo leh curry la dubay, hodan ah oo sahlan in la diyaariyo. | Cunnooyinka jikada
Baalal digaag ah oo la dubay
Baalal digaag ah oo la dubay, hab kale oo loo cuno baalasha, aniga waxa ugu fiican ee digaagga ku saabsan. Sidee bay u fiican yihiin baalasha, waa kuwo aad u cakiran oo dhadhan fiican. Waan hubaa inaad adiguba jeceshahay !!!
Waxaan ugu diyaarin karnaa siyaabo badan, suugooyin, la shiilay, la kariyey oo la siinayo iyaga dhadhanka aan ka helno siyaabo badan isla markaana aan uga dhigno kuwo khafiifa waxaa lagu diyaarin karaa foornada.
Curry waa isku dar ah dhir udgoon badan leh dhadhan badan, waxay ku habboon tahay labiska hilibka sida digaagga.
Cuntadani way fududahay in la diyaariyo, waxay leedahay waxyaabo kooban oo fudud, suugada curry waxaa lagu diyaariyey caano fadhi iyo xawaash. Ku habboon qadada ama cashada qoyska oo dhan.
Waqtiga diyaarinta: 40 m
Waqtiga karinta: 50 m
Wadarta waqtiga: 1 saac 30 daqiiqo
1 kiilo oo baalal ah
1-2 kareem ama Greek yogurt
2 qaadooyin macmacaan curry
Chives ama dhir
Si loo diyaariyo baalasha digaagga leh curry foornada, waxaan ku bilaabi doonnaa nadiifinta baalasha, oo waxaan ka sooci doonnaa durbaanka baalasha. Waxaan gelinay xoogaa milix iyo basbaas ah. Waxaan diyaarinaa suugada, baaquli waxaan dhigeynaa caano fadhi, shaaha oo ah chives ama dhir, waxaan ku darnaa shaaha oo ah curry, toonta shiidan. Wax walba si fiican ayaan isugu dhafannaa.
Ku darso baalasha digaagga baaquli leh maraqa diyaarsan, faafi oo si fiican isku walaaq baalasha. Waxaan u gudbinaa saxanka dubista. Waxaan u oggolaannay inay nastaan ​​xoogaa, ugu yaraan 30 daqiiqo.
Waxaan dhigeynaa foornada 200ºC, waxaan geynay isha leh baalasha la dubay. Waanu u rogi doonnaa si ay si fiican ugu wada bunni baxaan. Waan ka tagi doonnaa ilaa ay dahab ka noqdaan. Qiyaastii 40-50 daqiiqo.
Markay yihiin waan soo bixinnaa oo diyaar baan u nahay inaan wax cunno !!!
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Asxaabta » Galitaanno Kulul » Baalal digaag ah oo la dubay
Spaghetti leh toon faras ah